Akukho Nonsense Indlela yokuLahla iipounds ezingama-40 Inyanga!
Uyazi ukuba yintoni eyandiqhubayo idonga? Ndiyathetha, undiqhubela ngokupheleleyo amanqatha imihla ngemihla? Nanini na xa ndiya kwivenkile, ivenkile, iifilimu, ulwandle ... Ngokukodwa, NONYAKA ...
Abantu abaninzi ndiyayibona le mihla inqabileyo kakhulu ...
Iinyanga okanye kwimihla kude nokuhlakulela isifo sikashukela okanye ezinye izinto ezinxulumene nempilo enobungozi.
Ukuba ndiyakucaphukisa ngoku kuthetha oku, andiyixolisa ... kwaye ndiyakuthembisa ukuba, ndiza kukukhupha ngakumbi xa uqhubeka ufunda ...
Kodwa ukuba ukhuluphele ngoku okwangoku ... ngento encinci, okanye eninzi ... kufuneka uhlawule ingqalelo ngenxa yokuba ndiza kubelana nawe ngenye imfihlelo, i-fatting secret that works almost instantly ...
Unyibilikise iiplundi zakho ezingaphezulu kunye ne-flab engeyiyo ngaphandle kokuba ulahle ukutya okuthandayo, okanye uqhube umtya wakho kwindawo yokuzivocavoca.
Kodwa okokuqala, ndifuna ukukhaba abanye abantu kule khasi abangabani apha.
Into endikuya kukwabelana nawe akuyiyo i-dummies ...
Akunjalo kwii-Wimps ezichanekileyo zezobupolitika kunye nezoLuntu zezoLuntu ezithi "Ziyinto Enhle," kwaye zifuna ukuba unempilo kwaye unobuncwane nangona ungekho ekutshitsheni ukufa ekutyebeni ...
Kwaye oku akukona kubantu abanomlutha kakhulu kwi-Facebook kunye neyona nyaniso yeTV ukujonga le vidiyo imfutshane, enokuthi utshintshe ubomi bakho kwiminithi embalwa elandelayo.
Ngoko ukuba ungomnye we-THEM, unokuvala eli phepha ngoku ...
Kodwa ndinokuqinisekisa, ukuba undipha nje imizuzu emithandathu yexesha lakho ...
Yaye ukuba awunayo i-slug okholelwa ngokunyanisekileyo ukuba "uphilile" ngokuyalela i Coke Diet kunye ne-triese cheeseburger yakho, i-fries enkulu kunye ne-apula pie ...
Emva koko i- fat oil edibeneyo inyibilikisayo ndiza kukwabelana nawe UYA kutshintsha ubomi bakho ...
Nesi isithembiso sam kuni:
Musa ukwenza iphutha, uza kubona iziphumo ezibonakalayo kwiintsuku ezingama-7.
Ewe, uza kufumana iziphumo ezingapheliyo ngeveki. Yaye ukuba uyayigcina, uya kuba lula ukulahlekelwa ngamapounds angama-40 ngenyanga kwaye uvuke rhoqo ekuseni UKUBHALISA ngamandla, ubunzima kunye nokuzithemba.
Amawaka am abafundi abaxhamle kakhulu emhlabeni jikelele ... amadoda namabhinqa abo bonke ubudala ... ndibize "Akukho Nonsense Ted."
Enyanisweni, yile nto abanye bathi:
Njengoko unokubona oku, kusebenza kwaye andikho apha ku-BS wena ...
Kwaye andinguye ukuba ndizalise intloko yakho kunye nento engafaniyo ukuba i-$ 60 billion yokulahlekelwa kwemveliso yesisindo, kunye nabaqabane babo kwiindaba eziqhelekileyo, bakuxelele ukususela ekubeni ubengumntwana ...
Ngaloo nto ufuna ngokwenene, ukuncibilikisa amanqatha akho ngendlela elula ...
Nciphise umlenze wakho ngaphandle kokuba uhlawule kwimpumlo kwiipilisi, usebenzise izixhobo, iincwadi zokutya, "ukutya okuphantsi" kunye ne "sodas" kunye neendlela zokufunda eziqhelekileyo njengabantu abafana nathi kunye nam andinakuze sibambelele.
Ndiza kukubethela inyaniso engenazo iinjongo ... kodwa ukuba uyakwazi ukuyisebenzisa, kwaye ukuba uqhubeka ukhangele, ndiyathembisa ukuba ndiya kukutyhila inkohliso yokuqhaqhaqhaqhaqhaqhoba abo baxhamayo abafuni ukuba ukwazi ngako.
Eminye kulabo baqhawulayo ngomzuzu (ndiyathembisa oko ndiza kukuxelela malunga ne-ajenda "YENDAWO" yenkampani yokulahlekelwa kwesisindo iya kuphazamisa kwaye ikuphazamise) ...
Kodwa ndifuna ukuba wazi, ukuba ukhuluphele ngoku, ndinayo i-BIT yovelwano ngawe ... kuba kungekudala, ndandingatyebile. NDAKHONA.
Xa ndaya kuMcdalds, kwafuneka babize i-Burger King ngokulondoloza ...
Kodwa xa ndikhubekile ngenye inkohliso e-fat-melting I will show you, ngokukhawuleza yaba yinto endizenzekelayo ukuba ndilahle 10 ... 20 ... 50 ... ke i-100 pounds ...
Kwindlela ekhuselekileyo ye-100%, enempilo, elula neyendalo yonke.
Kodwa ngokungafaniyo "novakalelo" abantu abakuxelela ukuba "bazinyamezeli abazondayo" kwaye 'bazingca' ngobukhulu bakho, ndilapha ukuba ndixelele ukuba yinyani le imeko ngendlela engafanelekanga inokukhathaza indlela ozivakalelwa ngayo ncinane kwixesha elifutshane ...
Kodwa uya kuqinisekisa ukuba uncibilikise amanqatha akho, njengentonga yebhotela kwi-pan yokutshisa.
Emva kokuba ufumene enye inkohliso yokuncibilikisa ioli ndiza kukuxelela ngomzuzu, ulahle 15 ... 30 ... nokuba ama-50 okanye iipounds eziyi-100.
Yaye yonke into endiza kukuxelela kule mposhana emfutshane ixhaswa ngubufakazi obungenakuphikiswa. Khawucinge nje kwabanye abafundi bam:
Yonke into enye yayisebenzisa elinye iqhinga eliqhaqhaqhayo lokunyibilika kweoli endikunika lona.
Namhlanje, ngenxa yemfihlo endikuxelela ngayo, abafundi bam kunye nam andinomzimba omncinci ... sivutha ngempilo, amandla kunye nobunzima, ukujonga kunye nokuziva unyaka oneminyaka engaphezulu kwexesha lethu ...
Kwaye ngoku, sinemihlali emininzi kwaye sempilweni neminyaka eminyaka ukuba sijonge phambili kubathandekayo bethu.
Yayazi nje oku: Iqhinga ndiza kukubonisa ukuba uya kuzinyibilika kuloo mapaundi angaphezulu ama-FAST, indlela elula neyendalo ...
Kodwa andinaso ixesha lokukhathazeka nge-ego yakho okanye iimvakalelo.
Ndiyakhathalela kuphela ukufumana iziphumo.
Kungenxa yokuba oko ndiya kukubonisa ngokuqinisekileyo, ngokuqinisekileyo isebenza ...
Kwaye akunandaba nokuba ufuna ukulahlekelwa iipounds ezilikhulu ukugcina ubomi bakho, okanye ulahlekelwe iipounds ezilishumi ukuze ulungele ingubo yakho yomtshato ...
Akunandaba nokuba uyindoda okanye ibhinqa ...
Akunandaba nokuba uneminyaka elidala okanye uselula ...
Akunandaba nokuba uvela kwintsapho "yabantu abakhulu" bembona ...
Kwaye akunakwenzeka nokuba uvila.
Ngenxa yoko ndiza ku bonisa ukuba uqinisekisiwe ukuba uphumelele umsebenzi.
Akukho mbuzo malunga nawo.
Kwaye ndakuxelela ukuba kusebenza i-FAST?
Kuya kukufumana iziphumo eziqinisekisiwe zingadlulanga iintsuku ezingama-30, kwaye kwabanye abantu, kuthatha ngaphantsi kweveki ukubona iziphumo kwisibuko.
I-Yup, ndiyathetha ngokufumana iziphumo ezibonakalayo phakathi kweentsuku ezi- 7 zokuhamba.
Cinga nje ngeentsuku ezingama-7 ukususela ngoku ...
Ukuvuka, ukunyuka kwinqanaba, nokubona inamba iya ku-DOWN ukuze utshintshe.
Ndixelele ukuba akuyikukubeka entliziyweni yakho yonke imihla ...
Kwaye le nto inqabileyo inyibiliki yeoli inokusebenza nokuba uvila ...
Ngenxa yokuba inyaniso, awutyebile ngenxa yokuba uvila, okanye uyadla indlela kakhulu ...
Mhlawumbi kungekhona ngenxa yokuba unengxaki ye -roid, mhlawumbi ...
Mhlawumbi akunjalo kuba "unamathambo amakhulu ..."
Kwaye ndithandabuze kakhulu ngenxa yemeko ethile yempilo engaphambi kokuba ukhona.
Iindaba ezilungileyo kukuba ndineendlela ezilula kakhulu kwaye zingenakuzimela ukuba ulahlekelwe ZONKE zala mapaundi angaphezulu, ufumane ukuma, kwaye ekugqibeleni unamandla kwakhona ...
Eyilwe ngokukodwa kubantu abangafuni ukulambalala ngesinye isidlo esibuhlungu ...
Zidonsa kwindawo yokuzivocavoca ukuze usebenze kakubi ...
Okanye kufuneka wenze nantoni na eya kukunyanzela indlela yokuphila.
Imfihlelo endikufumanisa yona idinga umzamo omkhulu ...
Kwaye ndiyazi ukuba ulungele oko, kuba ukuba ubukele le ntetho, uyazi ukuba unamafutha kwaye ufuna ukuba utshintshe.
Uyondla ngamanga kunye ne-BS ukuba usondliwe kuwo wonke umphefumlo wakho, ekubangela ukuba uqhubeke ubhala ngeepounds.
Usenokuba ugula kwaye ukhathele ukusebenzisa izizathu zokuzama ukuqiqa isizathu sokuba isisu sakho siphumelele unyaka ngamnye.
Okwangoku, uluntu lwasentshonalanga luphethwe yi- epidemic epidemic.
Nangona kunjalo "abavakalelwa" oogqirha kunye ne-gurus baxoxa ngabantu "batyebile" njengePolio yakhe ehamba phambili okanye into ...
Njengokuba kukho into esizalelwe ngayo, kwaye akakwazi ukwenza nantoni na.
Nguwuphi uhluko phakathi kwezi "ziziva zihle" oogqirha kunye nam ...
Abafuni "ukulimaza imizwa yakho" ...
Umnqophiso wam kukukunceda ulahlekelwe isisindo, kwaye ndize ngeendlela ezilula kakhulu ukuncibilikisa amanqatha akho , nokuba uyayithiya ukutya kunye nokuzivocavoca njengoko ndenza ...
Kwaye ngokukhawuleza xa usebenzisa le ngqungquthela namhlanje , amakhilogremu angaphezulu kunye ne-flab engabonakaliyo ophetheyo iya kuqala.
Kukho esinye isizathu sokuba ndininika yona ngqo ...
Kukho uxhulumano oluchanekileyo phakathi kokutyeba nokuphuhlisa izifo ezisongela ubomi.
Ngaba wayesazi ukuba kwiphiliti nganye ukhulu kakhulu, kwandisa amathuba okufumana izifo ezinjengeeshukela, isifo se-cholesterol ephezulu kunye ne-hypertension nge-3%?
Ngoko ukuba ukhuluphele ngaphezu kweepounds ezili-10, oko kuthetha ukuba unama-30% amathuba okuphuhlisa into engalungile.
Masithembeke, zingaphi iipounds ezingaphezu kwesisindo ?
Umgca weyona nto, umbane ogqithiseleyo, mhlawumbi uya kufa ngenxa yalo.
Yaye uthembele kum, akukho mntu uyazi ngakumbi ngale nto kunam. Uyabona, abazange ba ndibize njalo "Akukho Nonsense Ted." Kumama wam, ndingu "Teddy Bear" ... umfana wakhe, umfana omncinci ... umama nobaba beyiloo nto oya kubiza ngokuthi "big boned" , ngoko bandibona nje njengesiqhelo ...
Kodwa abantwana esikolweni, babenamagama ngam ... amagama enkohlakalo, amabikayo ...
Ndiyakhumbula ndikufihla emanzini ngexesha le-gym class, okanye ukuya kumhlengikazi wesikolo kwaye ndizama ukulimala, nje ukuphepha ukuhlazeka ngokungakwazi ukwenza ukukhupha, okanye ukuhlala, okanye ukugibela umgca omnye ...
Okubaluleke kakhulu xa sasidlala ibhola. Andiyi kukulibala ihlazo elivuthayo ndicinga ukuba ndimi apho ndilindele ukukhethwa kwelinye lamaqela ...
UFreddy Bavaro, umdlali obalaseleyo eklasini yam kunye noxhaphazo olubi kakhulu, wayehlala ekhona "yeqela leengcali ..."
Kwaye wonke umntu wayesazi "iTubby Ted" yayiza kuba ngowokugqibela. Naliphi iqela eliphelile kunye nam, abanye abantwana baya khalaza malunga nokuba badlale "nembongolo yesonka"
Ndandiziva ndingenamsebenzi ... okwenze ukuba ndifune ukuphepha kwimidlalo nokuzilolonga ngokupheleleyo, kwaye ndidilize iintlungu zam ekudleni okungenamsoco kunye ne-sugary sodas.
Oku kwaqhubeka yonke iikholeji nakubomi bam badala.
Ngombulelo ndibenomfazi onothando uDarlene, kunye nabantwana bethu abakhulu abakhulu ... UDarlene wayenzima ubunzima bakhe ebomini bakhe, ngokunjalo, yiphi indlela esidibene ngayo ekuqaleni ...
Kwakukho amaxesha apho thina sibini sasihamba ngokutya, okanye sijoyine i-gyms, okanye senza umsebenzi ukuze sizame ukunciphisa umzimba ...
Kodwa le mizamo yayihlala iphilileyo. Naliphi na iipounds zikaDarlene kunye no-I bakwazi ukulahlekelwa ziza kubuya emva kokude, kwaye ndibe nzima kunanini ngaphambili ...
Ndiyakhumbula ukuzisa intsapho yam kwipaki yokuzonwabisa yenkwenkwe yam inzala yesibhozo. Wayephupha ukukhwela i-roller coaster ngeenyanga ...
Kodwa xa ndandinamanqatha ukuba ndifake ibhinqa elunxwemeni lwam, baxelele ukuba andiyi kuhamba, ngoko ke unyana wam akanako.
Wadanduluka yonke indlela eya ekhaya ... kwaye ndandibambezele iinyembezi zam. Iinyembezi zokuhlazeka ...
Kodwa ukuba ucinga ukuba kubi, akukho nto ifaniswa nento eyenzeka kwisikolo sam esikolweni esiphakeme ngonyaka odlulileyo ...
Ndingathanda ukuchitha loo mini enomyinge weengcambu ukuhlinzwa ngaphandle kwe-anesthesia, kodwa mna noDarlene sasisesikolweni samabanga aphakamileyo.
Kwaye wayefuna ukubona abanye abantu afunda nabo befunda naye, ngoko ndaya naye ngenyameko ...
Kwakuyi-picnic yangaphandle ngosuku olushushu olushushu ngoJulayi. Ndakukho apho, ndifunga njengengulube, ndihleli kwenye yalezo zihlalo zelinen zeluminiyamu ezikhupha ...
Ukucoca ubuso bam ngesitya esipheleleyo sokuphumla kokutya esiswini sam, ngelixa abantu endandifunda nabo befunda nabo beza bexoxa ...
Umtshutshiso wam omdala uFreddy Bavaro wayemi ngaphaya kwetafile. Ndambamba ngamehlo endibambe ngamehlo ebusweni bakhe, nditsho into ethile kumfazi wakhe ... kwakuyinto efanayo ukunyamezela ukuba ndiyenze xa "inkunzi yesilonda" ixhonywa kwiqela lakhe lebhola lebhola ... Ngethuba, ndava isandi somsindo ... isandi sensimbi yentsimbi ...
Kwaye ke, SNAP!
Imilenze yesitulo sam saqhekeza njengamazinyo, ndaza ndaqhekeka emhlabathini njengengxowa enkulu ye-blubber. Isitya sam esipheleleyo se spaghetti kunye nesaladi yezambane, kunye nekomityi yam yebhiya yamanzi, yachitha yonke into yam ... kungakhathaliseki ukuba ndibuhlungu kangakanani, andinakuzikhethela. Ndandijikeleza ngapha nangapha njengengwenya ye-beached ...
Ndakuva uMGULUNKULU ondijikelezileyo ... ngokukhawuleza ndandibuyela kwiklasi yokuzivocavoca ...
Akukho namnye owashukumisa isisipha ukuba andincede, de kube uDarlene agijime kwaye wandinceda ndibuyele ezinyaweni zam. Emva kokuba andincede ndihlambuluke, saya ekhaya. Kodwa ukuthotywa kobubi bam ubomi kwakuqale nje!
UFreddy Bavaro uye wabhala isiganeko esibi kakhulu kwifowuni yakhe ... kwaye wayithumela kwi-YouTube ...
Yaya "kwintsholongwane" ngobusuku, kwaye yabelwa kwi-Facebook ngabantu abayi-11,576.
Ndifumene ngoMsombuluko olulandelayo, xa ndihleli e-cubicle yam kwaye ndaqaphela iqela lamabambisene bam emi ngekhompyutheni behleka i-computer yabo ...
Uze undixelise ...
Ndasuka, ndinyuka kubo, ndaza ndazibona esikrinini ... ndahlwaywa ngotshani ngobuso obugcwele spaghetti ...
Ndawagxotha ngaphandle kwaye ndadlala ividiyo ngokusuka ekuqaleni ...
Kwaye ndalapho, ndihlahla epikinikini, ngoxa uFreddy wangifaka ... ekhuluma nje ngokuba wayebalisa iVideo Geographic video ...
"Nantsi iWhale Whale kwindawo yakhe yendalo, ubeka ubuso bakhe obuqhokisayo kwi-buffet ..."
Zonke iihlaya, ukuhlambalaza kunye nokuthotywa kwexesha lam elidlulileyo kwafika ngokukhawuleza kum. Ndiyakhumbula ndivakalelwa nje ukuba ndifuna nje ukunqumla kwindawo ethile, emnyama kwaye ndife ...
Nokuba ... okanye udle i-pizza. Yiyo kanye into endiyenzayo.
Ndibuhlungu gqitha ukuba ndibe ndijonga ... ndihleli ndodwa kwipuni e-greasy, ndikunqumla i-pie eyongezelelekileyo kunye nayo yonke into, ngelixa ndagubungela amehlo ami ...
Kwaye emva kweentsuku ezimbalwa, xa ndandifumana unyango lwangonyaka, ndatshitshiswa ebusweni kunye nokuqonda ukuba ubunzima bam bekungangenza i-stock laughing kwi-intanethi ...
Ugqirha wam wandifumene ne-High Blood Pressure kunye nohlobo lwe-2 lwesifo sikashukela, kwaye wandinika isilumkiso esinzulu sokuba ndibe nexanduva lokuhlaselwa okanye ukuhlasela intliziyo nganoma naliphi ixesha, ngaphandle kokuba ndilahlekelwe ubuncinane ubunzima beepounds ezili-100.
Wabhala phantsi imimiselo yecawa yamayeza ahlukeneyo, wandithumela i-waddling off ...
Ngoku, lo ngumntu onokuqiqa uya kuthi kubo, "UKUBA NGAKHO. Ixesha lokuba ndibe nesimo sobuhlungu besimo kwaye ndilondoloze ubomi bam! "
Ndandiziva ndingenamandla kwaye ndingenathemba.
Andizange ndikhathazeke ukuba ndiyeke ekhemisi kwaye ndiyithathe amachiza am ...
Endaweni yoko, ndibetha iMcDonald's-through and pick up food sufficient to bell a horse. Emva koko ndaya ekhaya ndaza ndaqhekeza phantsi embhedeni, ndibeka ubuso bam kwaye ndanduluka ngaphandle kweTV. Izingane zasezikolweni, kwaye umfazi wayesebenza. Ndiza kuba neeyure ezimbalwa ukuze ndikhuphe ngoxolo ngaphambi kokuba zibuyele ...
Kodwa ndiyicinga ukuba ndidle ngokwam ukutya kokungcola ... ngenxa yento elandelayo ndiyazi, ndandisuka ekubuthweni kwam ngezwi elivuthayo lomfazi wam, uDarlene.
Wayemi phezu kwam. Ukuqhawula imimiselo yam esandleni sakhe.
Ukuqhawula, kufuneka ukuba wawafumana kwisikhwama sam ...
"Ted, WENZA ntoni wena?" Wakhala. "Ndiyicinga ukuba akufuneki ukuba ndibuze ukuba ukunyulwa kwamagqirha akho kuhamba njani-la mayeza aphezulu yomshukela wegazi kunye nesifo sikashukela!"
Ndachukumisa iibhokisi ze-Big Mac ezingenanto ngaphandle kwesifuba sam, ndatshitshisa i-ayisikrile yetshokolethi emlonyeni wam, ndamhlelela kuye ngokukhungatheka ...
"Akunandaba nakweli nqanaba. Ndiya kufa ndibe mncinci kwaye ndatyebile, kufana nobawo. Sinokuyamkela, kwaye ndiya kuvuya xa ndishiye. "
Ngelo xesha ndaliva ilizwi lentombi yam eneminyaka engama-6 ubudala, u-Annabelle ...
"Tata ... uya kufa?"
Ndakhangela. U-Annabelle wayemi emnyango, ebamba ibhere layo elincinci.
Kwaye xa ndabona ukwesaba ubuso bakhe, kunye neinyembezi emehlweni akhe ...
Kuyo yonke yam iminyaka yokuthotywa kwaye ndiziva ndizintloni ngokwam ... akukho nto ihlutha intliziyo yam nje njengokuva intombazana yam intombazana ithi kum.
Ngentsasa elandelayo, umfazi wandixelela ukuba uya kuthatha abantwana kwaye ahlale endlwini kadadewabo isikhashana. Kwakungenakukwazi ukunyamekela ukuba bonke babone undibulale.
Kwaye bahamba. Kwaye ndachitha iintsuku ezimbini ezizayo ngendlala, ndithembela kwintlungu yam ...
Yintoni endiyifanele ndiyenze, udonsa i-butt yami-size butt ukuya kwindawo yokuzivocavoca kwaye ujoyine i-aerobics class?
Bonke baya kundihleka, njengabantwana babuya eklasini ... ukuba andiyi kufa ngenxa yeentloni, intlungu entliziyweni yam yayiza kutshabalalisa ibhaluni ...
Kwaye andinakukwazi ukusinda kumahlumela kunye namajikijolo, okanye nayiphi na into "yokutya ngokumangalisayo kwenyanga" yathi ukwenza ...
Ndandisele ndizame zonke ezo zondlo, kwaye zandenza ndibe nexhala, kwaye ngoko kunzima ukuba ndibe ngeenxa zonke, intsapho yam iya kuba ngcono ngaphandle kwam ...
Kodwa ndiyazi into enye: ndibe neyanele. Ndandidla ngokulala ngam.
Ugula ngenxa yokwenza izizathu. Ugula ngokusebenza njengexhoba.
Kwaye ngobo busuku, njengoko ndilala embhedeni ... yedwa ... ndizithoba kwi-tub ye-ayisikrimu kunye ne-channel-surfing ...
Impendulo ifunyenwe ME!
Kwakungomnye wala majelo eendaba angaphandle. Udliwano-ndlebe wathintana nodade odala, onobuqili ovela eSwitzerland eneevuvu ezide ...
Kwaye wayethetha indlela ikliniki yakhe eyayiqhube ngayo uphando olutsha, ukuqhubela phambili uphando malunga nokuba kutheni abantu abangaphezu komzimba kunokuba banzima kakhulu ukulahlekelwa ubunzima.
Akukho nto enokuyenza ngayo " amandla akho " ... Akukho nto enokuyenza kuthi " sivila " ...
Kungenxa yokuba ubuchopho bakho buye HAYWIRE ngenxa yokuba udla ngendlela engafanelekanga ixesha elide ... Okwangoku, ubuchopho bakho buthumela iimpawu ezingalunganga kwisisu sakho.
Ndiza kukuncedisa zonke izinto zenzululwazi awayezenzayo. Umgca weyona nto: cinga ukuba uyimoto, kwaye "i-gauge gauge" yakho ichaza ingqondo yakho ukuba "ungenalutho" lonke ixesha ... nangona ungekho ngempela ...
Enyanisweni, nangona ufumane itanki epheleleyo, i-BRAIN yakho iyicinga ukuba uphantsi - ngoko kukuxelela ukuba kufuneka udle i-junk ukuze uhlale uphila.
Yingakho ufumana ezo zifiso ... kwaye kutheni unqwenela ukutya kwe-BAD, kwaye unqwenela kakhulu kunabanye abantu. Ngenxa yokuba le nto umzimba wakho isetyenziselwa. Yaye ingqondo yakho icinga, ukutya okubi "yi-gas."
Nangona isisu sakho sigcwele, ingqondo yakho iqhubeka ikuxelela ukuba udinga igesi elongezelelweyo. Ngoko uqhubeka ubeka igesi, kwaye ekugqibeleni uqala ukuzalisa iitena zegesi uze uzilondoloze kwisiqu sakho, ngenxa yokuba ingqondo yakho icinga ukuba ungaphumelela naliphi na umzuzu.
Kwaye ke udokotela waseSwitzerland wathi into eyayingenza ndandisa iDoritos yam ...
Wathi ezinye zezinto eziphambili zokuphanda ezi zinto ziqhubekile kwi-Yunivesithi ehamba ngeeyure ezimbalwa nje ukusuka kwindlu ...
Ngoko ngengomso, ndandibeka emotweni yam kwaye ndenza uhambo ...
Kwaye ndachitha iiyure kwilayibrari yonyango ye-campus, ndahlala emva kobusuku njengoko ndagqiba kwizifundo ezingapheliyo kunye neengxelo zophando ...
Ndifumene ingcali yokunyamezela ngogqirha egama linguDkt. Louis Aronne, uMlawuli weNkqubo yokuLawula isisindo epheleleyo kwiNew York-Presbyterian Hospital / Weill Cornell Medical Centre ...
Yaye yaxhaswa into eyenziwa nguDokotela waseSwitzerland. Isizathu sokuba abanye abantu bakufumanise ukuba akunakunciphisa isisindo, nangona bezama zonke iintlobo zokutya kunye neendlela zokuzilolonga, kuba emva kokutya kweminyaka - kunye nokutya ngokutya-ukutya kweNtshona kunoko utshintsha ingqondo yakho.
Ukucacisa, ukutya kweNtshona okwenzekileyo kubomi bakho bonke kubonakalisa indlela yokubonakalisa kwi-hypothalamus, eyona nxalenye yengqondo yakho elawula isifo sakho semetabolism.
Ngoko ke ndaqhubeka ndimba, ndiza ngaphantsi kwaye ndijule ngaphaya komgobo wemivundla ... Kwaye ke xa ndifumene ukufundiswa komhlaba okupapashwe kwiBritish Journal of Nutrition, eyayingakaze yashicilelwe e-USA ...
akukho nto iphosakeleyo
Ndafunda ukuba iqela lezenzululwazi kwiYunivesithi yaseLiverpool lifumene ukuba ukutya okuseNtshona kunokuthi kuqhutywe i-chain reaction "ye-dabction function".
Oku kuthetha ukuba ubuchopho bakho buqala ukukukhohlisa ngempawu ezixubileyo ...
Ucinga ukuba ulambile kwaye u-CRAVE fatty, ukudla okuphezulu-carb, xa ungenayo imfuneko yonke ...
Ngokuhamba kwexesha, ukutya kwakho kwonakalisa izibilini ezenza iimpawu kwi-hypothalamus yakho. Oku kutshabalalisa amandla omzimba wakho wokulawula ubunzima bakho kunye nesifo samathambo ...
Kwaye ngoku, umzimba wakho usemgangathweni wokugcina "ogciniweyo" endaweni yefutha Imodi yeBURNING!
Imiyalezo yakho ingqondo ikuthumela malunga nesondlo sakho kunye nelambile yakho yonke ixutywe ...
Xa uzele, ingqondo yakho ikuxelela ukuba udle OKUNYE.
Yaye xa umzimba wakho ufanele ukutshisa iikhalori, ubuchopho bakho buxelela ukuba UKUQONDA loo makhalori njengamafutha.
Iindaba ezilungileyo kukuba, kukho indlela yokuguqula "ukungasebenzi komsebenzi" kwaye ubeke ingqondo yakho ngqo ...
Ngoko ukuba i-STOP isebenze ngokumelene nawe, kwaye iqale isebenze YAKHO ... uthumele umzimba wakho izibonakaliso EZIFUNDA, kunokuba uthumele iimpawu ezigcina unotyebile kwaye zenze i-fatter ...
Enyanisweni, kukho enye inkohliso yokuqhaqhafaza okunokuthi uyayisebenzisa , ukuguqula umzimba wakho ekubeni "ukungasebenzi komzimba" kwi "hyper-efficiency".
Ngoko ukuqala namhlanje, uya kucofa i-flab, utshise ama-pounds akho ngaphezulu, kwaye unciphise isisu sakho nangona ulala ...
Ngaphandle KUNYE umsebenzi onzima ofunekayo.
Okwangoku, unokuba neengcamango ezifanayo endinayo, njengokuba ndenze oku kukhwankqisayo ...
"Kutheni le nto ingatyekanga inkohliso efundiswa ngabo bonke ugqirha, kwaye ibhaliwe malunga neencwadi zokulahlekelwa kwesisindo kunye neemagazini zempilo?"
Icandelo le-60 billion yelahleko lokulahlekelwa kwexabiso lihlawula imali eninzi ukuqinisekisa ukuba le ngcaciso iya kuhlala ingcwatywe.
Enyanisweni, ndafumanisa ukuba ezinye zeeyunivesithi eziye zaqhuba izifundo malunga nokungasebenzi komzimba ...
Kwakhona wamukele izigidi zeedola ngezibonelelo kunye neminikelo evela kwiinkampani ezinkulu ze-Pharma-ezithengisa ukulahlekelwa kweepilisi, isifo sikashukela kunye nokunyanga kwegazi, kunye nazo zonke iintlobo zezinye iziyobisi oza kuzifuna ngenxa yokugqithisa.
Ukuba abaphandi kunye neeyunivesithi bafuna ukuhlala kwi-Big Pharma yokubhalwa kwintlawulo, kunomdla wabo ukugcina uphando lwabo phantsi kwe-wraps ... ukuze iGrama Pharma ikwazi ukukunondla iipilisi kunye nokuzityebi ngeendleko zakho.
Ndifumene i-treasure treasure ye -secrets-before-revealed-outs in the basement of the library yamateyibrari ... kodwa ayizange ibe yenziwe esidlangalaleni, kwaye ngoku uyazi ukuba kutheni.
Ndandikulungele ukubeka oko ndafunda kuvavanyo ...
Ngoko ke ndazinikela kwiinyanga ezimbalwa ezilandelayo kwelinye injongo ...
Ukunciphisa umzimba kunye nokuguqula uhlobo lwam 2 lwesifo sikashukela kunye negazi eliphezulu.
Kwaye ndiza kuyenza ngaphandle kokutya okunomdla, kwaye ngaphandle kokuchitha iiyure ndizithuthuma kwiimpahla zokunyathela kwaye ndisebenzisa isigxina sokufa ...
Njengoko iipounds zaqala ukudibanisa , kwaye amandla am nokthemba kwam ubuyela, ndaqala ukuqonda ...
Ukususela ngomhla wokuzalwa kwethu, siye saxoxwa malunga noko kufuneke ukuba sinciphise umzimba kwaye siwugcine.
Yingakho ukuba ukhuluphele okwangoku, okanye uthwala amanqatha angenakunzima kwiindawo eziphosakeleyo, akusiyo iphoso lakho.
Kuninzi ulwazi oluphikisanayo ngaphandle apho ungayazi ukuba ubani omele uthembele kwaye unokukholelwa.
Okubi nakakhulu, ezininzi "iingcebiso" ezivela kwizinto ezibizwa ngokuba yiingcali zilungelelanisa xa kufikelele ekulahlekelweni ubunzima kwaye uhlale ulungele, uphilile kwaye ujabule.
Akukuthi nje kukunceda, oko kukubangela ukuba uzuze kwaye ukhawuleze ukuguga!
Kungekudala, ndandiye ndajonga ngolu hlobo:
Kwaye njengoko ndandivuya xa ndabona iziphumo zam kwisibuko njalo ekuseni, andinakuqala ukuchaza uvuyo ndivakalelwa, ndiyazi ukuba intsapho yam sele iqhayisa ngam, njengokuba ndandidla.
Ndawubonisa umfazi wam uDarlene amfihla am amanqatha am , kwaye wayesebenzisa ukulahlekelwa ngamapounds angama-27 ngenyanga enye ...
Ndabelana ngako nabazalwana bam ... kwaye, nabo, bancibilika ngaphezu kweepounds ezili-120 ezidibeneyo.
Ndathumela iifoto zokuhamba kwam isisindo kwiphepha lam le-Facebook, kwaye xa ihamba nentsholongwane, ngokukhawuleza ndabona amadoda namabhinqa angabonakaliyo emhlabeni wonke undithumela "izicelo zomhlobo" kwaye ndicela ukuba ndiyimfihlo ...
Ngoko ndawabelana ngeengcebiso ezimbalwa kunye nabo, kwaye kungekudala bebathumela imifanekiso yabo ngaphambi nangemva kwemifanekiso baze babelane ngamabali abo okuphumelela ...
Ngelo xesha ndigqibe ukugqiba zonke iinyanga zam zophando kunye nedatha kwisinye inkqubo esilula, isinyathelo-nge-nyathelo eyenza into enye, kwaye enye into kuphela ...
Gcoba amanqatha akho uze utshise amaninzi amaninzi njengoko ufuna, FAST.
Enye intokazi, uJane S. waseSarasota, eFlorida, wamthumela phambi nangemva komfanekiso kwiphepha le-Facebook, kunye nalo myalezo:
Ngaloo nto umfazi wam uDarlene eqala ukungcola esithi "Mnu. Hayi-Nonsense, "kwaye ndicinga ukuba unokuthiwa igama lami leqhayiya ... yena, andiyiqondi ^ ngokuqinisekileyo uyabetha abantu ngokuthi" Teddy Bear "okanye" Tubby Ted, "akunokuthi?
Emva kokuba ndiqalise ukwenza i- My No Nonsense Fat Melting System iyifumaneka kuluntu, ukuhlaziywa kwamabala kunye nemifanekiso emangalisayo iqhubeka igxotha ...
Bonke babekwazi ukufumana iziphumo ezimangalisayo ngokuthatha nje ukunyaniseka, "akukho nto iphosakeleyo" yokulahlekelwa ubunzima.
Ukujonga emva kwinqanaba lam, kunzima ukucinga ukuba unyaka omnye odlulileyo, ndabambelele embhedeni wam ndiziva ndizisole, kum, umfazi wam ushiya ...
Kwaye ukuba undikhangele kum ngoku, kunzima ukukholelwa ukuba ndikhulu ngaphezu kwamakhilogremu angaphezu kwekhulu.
Ngoku ndibona ubomi beembono ezahlukeneyo ...
Ngenxa yokuba kunye nesisu sami esikhulu, esingasondelanga, uhlobo lwam 2 lwesifo sikashukela kunye nePhepha lokuPhepha kweGesi eliPhezulu liye laphela ngaphezu kweenyanga ezintandathu ngoku.
Abafundi bam bajonga kwaye baziva bekumangalisa, ngokunjalo, njengoko unokubona:
Ngoku ikhefu lakho ...
Ndiyibiza ngokuba yiNational No Nenseense Fat Melting System ...
Yaye yinkqubo yodwa ekhoyo apho ichaza enye iqhinga eliqhayisayo elitshintsha umzimba wakho kwi-"disabilisation function" kwi "hyper-efficiency".
Lo mnye onobuqhetseba obuncibilikiweyo obuncibilikiweyo obuncibilikiweyo bubungqina bezenzululwazi ukutshisa ngokushushu amafutha emzimbeni wakho xa ulala, ukuze ungavumi kuphela ukukhanya, kodwa ugcwele amandla kunye nobukhulu obungenakuvakalelwa kwiminyaka, mhlawumbi namashumi eminyaka.
Yaye ukuba ucinga ukuba kuya kuba nzima, cinga kwakhona ...
Ngenxa yokuba ndaphuma endleleni yam ukwenza ukuba le nkqubo iphumelele kunoma ubani ongenalo ixesha okanye inzala ekusebenzeni iiyure ngosuku, okanye enze nantoni na into yokunyanzela indlela yokuphila.
Ndikholelwe, njengoko ndinyamekile kwaye ndilungele njengoko ndikhangele, ANGIZI-fan enkulu yokuzivocavoca. Ngoko ndiya kuqinisekisa ukuba sigcina loo nto incinci, ngelixa ifumana iziphumo eziphezulu.
Khawucinge uguqula iintloko ekuhlanganisweni kwesikolo sakho esilandelayo esikolweni esiphakamileyo, okanye usapho lwakho olulandelayo luhlanganisane ... kwaye ubenokubuza ukuba imfihlo yakho ...
Khawucinge ukuba unomdla onjani uvakalelwa ukuba yonke imicimbi yakho yempilo eyenziwe ngumthwalo wakho konke kwaphela ...
Yaye yinto yokuqala yokumangalisa ubomi bakho obutsha, emva kokuba uzama "indlela ececekileyo" yokunciphisa isisindo ... .nezinto ezininzi.
Yonke into ofuna ukuyifumana ukutshitshisa amanqatha emzimbeni wakho I-FAST ingaphakathi kwikhosi ye-digital, ongayijonga ngokukhawuleza kwikhompyutha yakho, i-smartphone okanye ithebhulethi.
Okwangoku, le Nkqubo engeyiyo ye-Nonsense Fat Melting System incede abantu abangaphezu kwama-16,300 amadoda namabhinqa. Kwaye amadoda abo, abafazi kunye namalungu entsapho banombulelo njengoko kunjalo.
Ukuba oku akusikho ubungqina obufanelekileyo kuwe, buyela esikhwameni sakho seDoritos kunye nemiboniso yakho engabonakaliyo yeTV, kuba akukho mntu-okanye mna, okanye omnye umntu-uya kukwazi ukunceda.
Kodwa sonke siyazi, ufuna ukuba yimbali yam yempumelelo. Ufuna ukujoyina amawaka amadoda kunye nabasetyhini babo bonke ubudala, ukusuka kulo lonke elasehlabathini, abaye bafumana iziphumo ezingenakuvela kule nkqubo elula yokufa.
Ngendlela, abo babe ngabantu abazama "i-beta" inguqulo ...
Ukususela ngoko, le nkqubo yedijithali elula ukuyisebenzisa iphuculwe kwaye iphuculwe ngezinye iingcebiso kunye neengcingo ukwenza kube lula ukutshisa amafutha, ukuze ube yinto epheleleyo yokungabi nciphisa umzimba.
I-100% "umntu onobuhle" onobungane ...
Ngenxa yokuba le yinkqubo enye eya kukubamba ngesandla kwaye ikuhambe ngamanyathelo, ukwenzela ukuba ngexesha lokufumana izandla zakho, uya kukwazi ukuguqula imiba yakho yesisindo kwaye uqale ukufumana umzimba owenze soloko ndiphupha ...
Njengoko ungancibiliki ngokukhawuleza loo mapaundi angaphezulu nangona ulala!
Kwaye ukuqinisekisa ukuba impumelelo yakho iqinisekisiwe , unokuqhagamshelana naluphi na ixesha ofuna ukubuza umbuzo malunga nekhosi, okanye malunga nemeko yakho.
Oku kunene nje isicu se-iceberg. Ngenxa yokunciphisa ixesha, ndinokukuxelela kuphela malunga ne-10% yento oyifumana ngaphakathi kwinkqubo epheleleyo ...
Eye yahlaziywa kwaye yahlelwa yi-MD ehloniphekileyo yaseMelika, kwaye iquka negalelo ukusuka kwinqanaba lezinye ukulahlekelwa kwesisindo kunye neengcali zezempilo.
Kufuneka uqaphele ukuba nangona le mveliso emitsha, awukho ihagu yengulube. Ngaphambi kokuba ndirekhole le ntetho, besele siphephe ngaphezu kwamadoda angama-16,300 amadoda namabhinqa avela kwihlabathi lonke.
Kukufihlile, nokuba uyindoda okanye umfazi, kwaye kungakhathaliseki ukuba iminyaka yakho ...
Kwaye isizathu salo silula ...
Oku akukho Netsense ye-Fat Melting System ilungisa ingxaki yakho kwizinga eliphambili.
Akuyilungiselelo lesigxina okanye "uncedo lwebhanki ..."
Emva kokuba ubunzima bakho bebuyiselwa, baya kupheliswa ngokusisigxina.
Akukho iif, iimpawu okanye i-orbes.
Kungekudala, uya kukhululeka ekuhlazweni, entloni, ukuphazamiseka kunye nokuzithemba okuphantsi kwezo zinto zonke ezizenzekelayo ujikeleze ...
Kungekudala uza kuba nokuziqhenya, ubude kwaye uqinisekile ... kuba awenaye kuphela oqaphela indlela enhle ubukeka ngayo ...
Abanye abantu ngoku bakubheka ngokumangalisa nangona umona, kwaye befuna ukuba BAZAZI imfihlo yakho yokuncibilikisa okunamafutha ...
Kwaye awusoze wanyuka njengekhoboka kwi-Big Pharma, uxinzelele kwixinzelelo eliphezulu legazi kunye nesifo sikashukela ngenxa yokuba ubunzima bakho bunzima ngenxa yeengxaki zempilo ...
Yaye ezo zimbalwa zezinto zempilo oza kuhlangabezana nazo xa ungayazi le mfihlelo ye-fat fake.
Ukugqithisa kakhulu kukunye kwezona zinto ezibangela ukungaxhatshazi ngokwesondo kunye nokulahleka kwe-libido yamadoda nabasetyhini ... engonakalisa ubudlelwane kunye nokuqhekeza iintsapho.
Ngoku uyaqonda ukuba ulawula ikusasa lakho ... Kwaye uza kuziva ukhululekileyo inkululeko. Ngenxa yokuba, ukususela kulo suku kuya phambili, akuyi kubakho omnye oya kuthatha isigqibo sokuba kwenzekani ebomini bakho kodwa wena.
Ngaba akuyi kuba yinto enommangaliso?
Esikhundleni sokuhlazeka, ukukhungatheka kunye nokuziva utyhafile kwaye uphelelwe phantsi ukuba uziva nje ngoku?
Uyazi ukuba unelungelo elingcono kunalo ... kunye nabathandekayo bakho. Bakufuna kuwe. Akunjani na ngoku ngoku.
Kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba, xa ungenzi nto ngoku kwaye ufumanisa le Nkqubo yonke yokuNyuka kwamaFat, yinto nje yithuba nje ngaphambi kokuba ezinye iidemon ezinxulumene nobunzima zinciphise ubomi bakho bufutshane ...
Iidemon ezifana nesifo sikashukela ...
Cholesterol ephezulu ...
Kwaye ezo ziqala nje ...
Ukungaxeli ngxaki enkulu yezemali ezi zidemon ziya kubangela intsapho yakho ...
Ingaba unemibhobho yemali eyongeziweyo ejikelezileyo, ukuze uqiniseke ukuba unako ukugubungela iindleko ezinkulu zezogqirha oza kulukhawuleza ukuhlawula, ukuba awuyi kuthatha inyathelo?
Ufuna ixesha elingakanani kunye nemali ofuna ukuyilahla xa uphatha iimpawu zokuba ukhuluphele, xa ungaphilisa ingxaki engundoqo kwaye uphinde uguqule yonke imeko yakho yezobugqirha uze uphinde uvuselele umzimba wakho, impilo kunye nokuzithemba - kanye kunye nonke?
Ukuba musa oku ingasombululwa, kwindawo ethile phantsi umgca ... ingaba msinyane nje ngomso, okanye ngexesha kwiminyaka 10 '... uya kuba elele ebhedini esibhedlele netyhubhu unamathele kuwe, nomatshini intliziyo uthathekile phezulu esifubeni sakho, ngexesha ukuba nisijonge amaqhinga ndijonge phezulu ...
Kunye namalungu osapho lwakho emi phezu kwenu, uyoyika kwaye ukhathazekile abagulayo ...
Yintoni kuveliswa entlokweni yenu ke ngoko?
Emazantsi ngaphakathi, ukuba uyafuna, ukuba ayamnkele okanye akunjalo, uyazi ukuba amanqatha kakhulu kwandisa amathuba okuba yesifo esibi okanye ukuhlaselwa yintliziyo ngesiquphe ubekubetha phantsi ...
Ndiyazi ukuba, waba kwimeko yam omnye iingcingane akonwabanga mna kakhulu iqabane lam ukuba ukuya kufuna omnye umntu, endaweni nam emva kokuba ndimkile ...
Yaye abantwana bam ikhula ezinye nguyise, nokuba akukho uyise konke konke ...
Kwaye xa abantu bakho ukuba ukudlulela, Xa sele iphelile, ngaba ngokwenene ityala ngazo?
Ingakumbi xa uyazi ubungakwazi ukuvimba konke oku, ukuba babesanda wazama le Akukho Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System namhlanje?
Eyona nyaniso yile, ukuba amafutha yingxaki encinane unako ngoyaba, kwaye ndiyathemba ukuba "uya kude."
I-mkhulu line yakho esinqeni, iingxaki ezininzi uza nayo ...
Ukuba ngaba uthathe inyathelo, oko kwakuthetha ukulahlekelwa kakuhle kakhulu na impilo yakho, ubomi bakho ngesondo, ikamva lakho zemali, umtshato wenu, usapho lwakho, yaye yonke into ubambe abathandekayo ...
Yiyo loo nto xa ujonga kwi iindleko ezibandakanyekayo NOT ekuthabatheni inyathelo, oyenzileyo ngokupheleleyo ... emzimbeni, emphefumlweni nasemoyeni.
Bandithembe, Ndakhe ndaya iimbadada zakho ... mna ezityebileyo, kwaye ndiyazi loo nto ikwenza uzive kanye ngayo ... It konakalisa intembelo yakho ... It lamanxuwa akho ukuzithemba ...
Ziphephe iimeko ezikwenza uzive ungakhululekanga, kwaye ayeke ukuphila ubomi ofuna. umzimba wakho uba entolongweni yakho ... mkhulu wena ufumane ezincinane, entolongweni yakho. Ndandikho apho ... ndiye ndafunda indlela nzima ... kwaye phantse wahlawula ixabiso lokugcina.
Uyazi amava yam ilwa i "ukutyeba ziidemon, 'yaye yintoni kwakufanele ndiye kuyo ukuze uqiniseke ukuba musa Wayengavumi ukuba ukudalelwa ...
Kwaye ndiyazi ngawakhe indlela uzama nje ukuba 'aphathe' iimpawu XIN'WE intlungu.
Ngoko makhe ukukubuza umbuzo omkhulu ...
Loluphi uhlobo ixabiso ubuya u kwihi ikhondo zinyibilike kude ngamanqatha yakho ngonaphakade, buyisela yinqolonci yakho, ndikunike iziphumo ngexesha nje elingephi 7 iintsuku?
Ndazi lukhulu yamadoda nabafazi akhokhele ngovuyo imali eninzi ukuze eli lungelo ...
Kwaye cinga nje malunga nexesha kunye nemali sele ayilibale "iipilisi ummangaliso, 'ukutya kuba nje kuthandwa, umthambo izixhobo, abaqeqeshi zobuqu, ubulungu gym, okanye ezinye iindlela ukunciphisa umzimba ukuba AWUNYANZELEKANGA akunike iziphumo athembisa.
Emva kokuba usebenzise elula yam No-Yimfitshimfitshi Fat Ukunyibilika System , ndiye abafundi khawundixelele babeza uhlawule ngaphezulu kwe $ 1.997 nje ukufumana imvume yokungena kule lwazi yama ...
Kodwa ke iindaba ezimnandi zezi, andikho obawayo Big Pharma CEO abathile obakhathalelayo kuphela malunga akhande iipokotho zakhe. Ndingumntu nje umntu avareji njengawe. Ndiyayazi into ihamba ...
Umahluko kuphela kukuba, Ndibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba bakhubeke phezu imfihlelo leyo evumela ukuba ukuyityhila le "ndlela wonqena 'ukuba aqhumisele ngamanqatha ngokukhawuleza kwaye zonke-ngokwemvelo.
Ngoko ke into endizakubuza ukuba uhlawule $ 1.997.
akayi kuba $ 997. Akusayi kuba $ 197.
Kuphela mali sakho namhlanje ngexesha elinye kuphela, ngokupheleleyo ngedipozithi engabuyiswayo ukuba imali ubona ngezantsi ividiyo. I Singathanda ukuba ukunika oku simahla, kodwa nceda baqonde mna projektha kunye neendleko I kufuneka ndihlawule, ukuba ugcine le website intanethi ...
indlela engcono yokunciphisa umzimba
Kwaye yam iindleko lewebhu ekhula nyanga zonke, njengoko amawaka amadoda kunye nabafazi ukuyityhila le sayithi yonke imihla ... kufuneka nam ahlawule iqela lethu ngobubele Inkxaso Customer ukuba ifumaneke ukukunceda iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki.
Kodwa oko bekufuna ngokwenene kuphela ngedipozithi engabuyiswayo ...
Ngenxa yokuba Kwimeko engalindelekanga yokuba awuka nemincili ngamandla kunye neziphumo onokulufumana zam No-Yimfitshimfitshi Fat Ukunyibilika System, idipozithi yakho ngexesha elinye, kukuba ayibuyiswa 100%.
Unga email iqela lwam lobuhlobo Inkxaso nguMthengi, kwaye ufumane zonke idenariyo emva ngalo naliphi na ixesha kwithuba iintsuku ezingama-60 ezayo.
I sicebisa ukuba ukufikelela kwinkqubo, baswayipha iimfihlelo, uze ugqibe ufuna idipozithi yakho engabuyiswayo emva kusini. Kukho into iintsuku ezingama-60 ezipheleleyo ukwenza njalo.
Njengoko ubona, ndikhe wawasusa onke ingozi kuwe ndawubeka phezu emagxeni am ... ngoko ke ngoku, akukho ngokupheleleyo akuyithetheleli ngokunganikezeli oku itrayi.
Khumbula, nje xa kunokwenzeka uzakugqiba noba ufuna imali wakho, ngenxa yaso nasiphi na isizathu, nonke nina kufuneka uyenze ukuthumela i email. Uya kubona ukuba qhagamshelana indlela iqela lethu Inkxaso Customer xa ufaka Amalungu ethu Area ufumane ufikelelo kwinkqubo.
Ngoko uyabona, mna ngokwenene hayi jerk usenokuba ndacinga ukuba xa waqalisa ukufunda eli page.I'm nje "engafuni nkathazo 'uhlobo mfo ongavunyelwayo lunikezelwa ekubeni nina iziphumo.
Ke mna ndiya kuthi ukuba kunjalo kude, bambalwa kakhulu abantu acele idipozithi emva kwabo. Endaweni yoko, siza imeyili yonke imihla kubantu kunye namabhinqa ayo yonke iminyaka abafuna ukubulela kuthi.
Okwangoku, siza ukutshintsha ubomi babantu abangaphezu 383 ngosuku, ehlabathini lonke ...
Ngoko nje ukuba wena eyimfe bakhululeke kwaye wenze le a no-brainer, nantsi yethu Iron-ezilala, 100% yiMali Guarantee:
Ukuba wam No-Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System akukuniki kuni, inguqu ubomi ukutshintsha omkhulu ofuna kwaye bafanelwe ...
Kwaye mna ndithetha malunga liyehla nje wesikiti okanye ezimbini, mna ndithetha ngohlobo inguquko na abahlobo bakho, osebenza nabo kunye namalungu osapho ecela wenze INDLELA kuwe ...
Emva koko nimane ukuba imeyili iiyure ezingama-24 iqela lam Inkxaso Customer nangaliphi na ixesha phezu iintsuku ezingama-60 ezilandelayo, uze ucele ukuba idipozithi yakho babuyela ngokupheleleyo. Kulungile ukuva oko umva, elowo idenariyo, akukho imibuzo ebuzwa.
khumbula nje - une iinyanga ezimbini lonke, okanye iintsuku ezingama-60, ukuze ucele imali yakho ukuba ibuyiselwe.
Ngoku, ekubeni ndibona kude oku, ndiyazi ukuba unomdla kakhulu. Wena uyeva ukulungele ukuthatha amanyathelo ...
Ngoko makhe ukudambisa le deal ngokukunika kulandelayo "iibhonasi Fast Action" xa uzama wam No-Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System namhlanje:
Fast Action iBhonasi # 1 -
The "isisu Flab No More" Ingxelo Exclusive (A $ 47 Ixabiso)
Eli xabiso kubhula, akukho-Lutho ingxelo ibonisa ukuba kanye into ekufuneka uyenze ukuze aqhumisele ngamanqatha belly ekujoliswe kuyo kwicandelo lakho phakathi.
Nje ukulunyukiswa, sifumene iingxelo ezivela abafundi ukuba nje enye ye iimfihlelo ezininzi kwesi sikhokelo bonus kwanele ukwenza yakho iblukhwe "endala" ngokoqobo awe emanqeni akho, ngenxa yokuba uya kuba ukunyibilika kude isisu amanqatha ngokukhawuleza kangaka ...
Ngoko qiniseka ukuba sele ukulungele ukuqalisa ukuthenga iimpahla ezintsha!
Okulandelayo, ndiza kuninika ...
Fast Action iBhonasi # 2 -
I "Instant umzimba ucinezelo" wangaphakathi Ingxelo (A $ 97 Ixabiso)
Ngaba uyazi kukho 'inqatha utshintsho evuthayo' ngaphakathi emzimbeni wakho kanye ngoku - leyo icinyiwe? Makhe sibone ukuba kweso indlela yokuswitsha kwakhona, ukuze supercharge imigudu yakho umzimba.
Wakuba eyona ndlela ukwenza utshintsho amafutha esivuthayo, somzimba wakho uza kukhawulezisa ukuya kwinqanaba eliphezulu kwaye uya kufumana iziphumo fat-yokunyibilika oluikhawuleza kakhulu.
Kwaye loo nto bonke. Kwakhona uya kufumana ...
Fast Action iBhonasi # 3 -
I "Minute Five Fat anzima Series" (A $ 177 Ixabiso)
Ngoku khangela, uza kufumana iziphumo ilahleko ubunzima emangalisayo nje ngokusebenzisa le nkqubo ephambili, xa ndathi kukho zero umgudu ababandakanyekayo, bendixela ukuba ...
Ke ukuba anithanga engqondweni bachithe nje imizuzu embalwa ngosuku ukwenza imithambo ezilula kodwa super-olusebenzayo, unako isantya iziphumo zakho AND uguqule flab yakho ibe ibhityile, izihlunu sexy.
Ngaphakathi kolu ngcelele okukhethekile video, onokuwatshintsha kuphela ukufumana ngokuzama ngaphandle kwam Akukho Yimfitshimfitshi Fat Ukunyibilika System namhlanje, uya kufumana fat imizuzu emihlanu ngokukhawuleza kwaye kulula aveza umthambo ukuba ungenza ethe zava emakhaya yakho.
Ngoko makhe kukukhumbuza iibhonasi ezamahala extra uza kufumana nangoko xa uzama ngaphandle kwam Akukho Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System namhlanje:
I ' isisu Flab No More "Ingxelo Exclusive (A $ 47 Ixabiso)
I ' Instant umzimba ucinezelo "wangaphakathi Ingxelo (A $ 97 Ixabiso)
Kunye " Five Minute Fat anzima " Video Series (A $ 177 Ixabiso.)
Yiloo $ 321,00 ezixabisa yexabiso extra kwaye uzama xa wena yam Akukho Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System itrayi namhlanje, ngokupheleleyo ingozi-free.
Khumbula, le nkqubo kuphela phaya elicacisa uneemina yakho umva izifo zakho ezinxulumene-ubunzima ngokusisigxina, lihlasela ingxaki ezingundoqo yayo.
Ke kaloku, xa kuthe kwakho isigqibo ukucela imali yakho ukuba zibuyiselwe, kuza ukufumana ukugcina Akukho Yimfitshimfitshi Fat Ukunyibilika System, kunye nabo bonke iibhonasi.
Nantso komncinane endinokuyenza, ukuze ndiyabulela kuwe kuba ubukele le ntetho kunye nokunika oku itrayi.
Ngoko ke hamba phambili. Cofa i "Yongeza kwinqwelo" iqhosha ngezantsi. Akukhathaliseki ukuba ngaba ezintathu kusasa - xa ucofa iqhosha, uya kuhluthwa Checkout lethu Page, apho uya ugcwalise ifomu ngokukhawuleza. Iyakuba kuthatha 30 yesibini, ihamba.
Ewe! $ Kuphela 37 - Ne 100% yiMali Guarantee elipheleleyo!
FUMANA EKHAWULEZILEYO ACCESS, IINTSUKU EZINGAMA-365 NGONYAKA, 24HOURS NGEMINI!
Iinkcukacha zentlawulo zakho kunye neenkcukacha zakho zothi zigcinwe ziyimfihlo ngokupheleleyo, ngenxa yokuba lo Checkout Page ibhalwe ngokufihlisa kunye zakutshanje 256-Bit ubuchwepheshe.
Nokukhusela phambili ukhuseleko kwakho, akukho nto malunga Akukho Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System iya kuvela kwikhadi lakho lokuthenga ngetyala okanye ingxelo yebhanki.
Inye kuphela eya kubonisa uya kuba intlawulo ukusuka 'CLICKBANK, "nto leyo kumqhubekekisi intlawulo ekhuselekileyo ukuba sisebenzise. (Bona ukuprosesa ngaphezu 100,000 iintengiselwano ekhuselekileyo yonke imihla.)
Kodwa ngaba kufuneka senze ngoku. I ngokunyanisekileyo abayazi indlela elide Ndiyakwazi ukugcina ixabiso le eliphantsi phambi ndiya KOKULAHLEKANA imali, ngokoqobo ngokunika kude for cheap kangaka ...
Ngoko ke lixesha lokuba nqakraza i "Yongeza kwinqwelo" iqhosha ngezantsi, zalisa checkout lakho kwiphepha elilandelayo, kwaye ufumana ufikelelo olukhawulezileyo ukuya epheleleyo Akukho Yimfitshimfitshi Fat Ukunyibilika System, kunye zonke wokhululekileyo iibhonasi ngokukhawuleza-amanyathelo.
Ndikhangele phambili kuni ukuba ibali lethu elilandelayo impumelelo.
Zive ukhululekile ukuthumela i email kunye undixelele malunga ngempumelelo emangalisayo eninalo nayo ...
unike nje edubuleyo, kwaye ndiqinisekile ukuba uza kuguqula ubomi bakho bube bhetele, ukuqala imizuzwana nje-60 ukusuka ngoku.
Ngoko ke elinde ntoni?
Cofa i "Yongeza kwinqwelo" iqhosha ngezantsi uze ugqibezele inkqubo yokuhlola.
Ithatha kuphela imizuzwana 30 ukuba ugcwalise ifomu kwiphepha elilandelayo, yaye kwimizuzwana eyi-60 uya kuba inkqubo epheleleyo, yaye zonke iibhonasi, kanye phambi kwenu kwiskrini sakho.
Kanye ngoku, wena ngokusisiseko ongakhetha amathathu ...
Option 1 - Unga ukuvala eli phepha uze uqhubeke ukuphila ubomi bakho njengesiqhelo, ugcine ukufumana iziphumo njengesiqhelo. Ukuphoxeka More, ukuphoxeka, unxunguphalo kunye noloyiko malunga nalapho impilo yakho intloko ...
Ngoko kukho Option 2 - Ungasebenzisa ulwazi Ndifumene kule ntetho ukuba "bangadluli" sizame oku kuzihlalela.
Kodwa nantsi eyona nyaniso: ngaphandle kokuba uyazi ngqo imfihlelo ephuphumayo yokunyibilikisa namanqatha ukuba ngaphakathi kwale nkqubo, akukho mali 'trial kunye impazamo "Kuza ukulungisa ngokusisigxina umba yangempela emva ingxaki yakho ubunzima.
Yaye kutheni wena ufuna ukwenza mhlawumbi wenze ingxaki yakho mbi, xa Akukho Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System lisusa yonke inawo izandla na isisombululo?
Kwaye ke, kufuneka Option 3 - Unga ukuzama phandle i Akukho Yimfitshimfitshi Fat okunyibilika System namhlanje ukulungisa le ngxaki kanye nabo bonke ngokuthi baxhamla kule wesisa, libekelweyo ixesha umnikelo ibuye ngokupheleleyo.
Uya ukufumana inkqubo epheleleyo, kunye iphakheji bonus epheleleyo, wonke umntu osezantsi, 100% ngedipozithi engabuyiswayo.
Khumbula, iibhonasi ngokwabo zixatyiswa $ 321,00 kwaye Nixabiseke lee ixabiso yedipozithi.
Vele ucofe iqhosha odolo ngezantsi, uze ugqibezele hlola yakho inkqubo.
Khumbula, ufumana ukuzama oku ngenxa lonke neentsuku ezingama-60 ngaphambi kokuba ugqibe ufuna ukuba ingacela idiphozithi umva yakho ibuye.
Ukuba ndibona kude oku, kufuneka ukuba beyiseke ngezinto ezimbini:
Enye, awukwazi ukuhlawula ukuba silinde omnye umhla ukusingatha imiba yakho ubunzima futhi uzilungise kanye kunye bonke. (Kwaye kutheni ufuna ukuba ulinde, xa isisombululo ilinde wena kwiphepha elilandelayo
kwaye ilula, ekhuselekileyo lonke-zendalo?)
Ababini, ngokuba le ukunikela ingozi-free ngokupheleleyo, nje ongamenzanga ingqiqo Kwathi phezulu eli thuba okanye uthi, "mhlawumbi kamva." Le kwixesha elizayo uzama ukuba utyelele le website, ixabiso usenokuba kathathu okanye kane .
Ngoku lixesha lokuba ukubuyisela impilo yakho, ulonwabo kunye nenkululeko. Cofa i "Yongeza kwinqwelo" iqhosha ngezantsi uze ugcwalise ifomu encinane ngokukhawuleza kwiphepha elilandelayo. Iyakuba kugqiboezakuthatah imizuzu engama-30, ihamba.
Musa ukulibala, Checkout wethu Page ikhuselekile 100%, abonwabileyo, kunye neenkcukacha zakho zothi zigcinwe ziyimfihlo ngokupheleleyo.
Xa uzalise checkout, le epheleleyo Akukho Yimfitshimfitshi Fat Ukunyibilika System, kunye zonke iibhonasi, iya kulungiswa wena kwiskrini sakho kwimizuzwana eyi-60.
Cofa i "Yongeza kwinqwelo" ngezantsi, uze uthabathe inyathelo ngoku.
Musa ukulinda ixesha elide ...
Ngoku lixesha lokuba athathe kwaye amhlangule ulonwabo kunye inkululeko yenu.
Ngoku lixesha lokuba umva ngokusisigxina nokusombulula iingxaki zakho ubunzima ...
Kwaye ukuba zijoyine amawaka zethu abafundi sinombulelo abo ekugqibeleni ilingane, sexy kunye noluvo omkhulu!
Ngoko ke musa ukulibala phambili. Cofa ngezantsi i "Yongeza kwinqwelo" iqhosha, kwaye ke masitsho siqalisa.
QALA UKULAHLEKELWA WEIGHT NAMHLANJE!
ekhaya | Iinkcukacha zoqhagamshelwano | Imigomo yesevisi | Privacy | Support | lwemibandela | nabasebenzisana
Zonke Copyright Material ©-2016 - -2017 NonNonsenseTed.com
ClickBank ke umthengisi le mveliso. CLICKBANKÂ® i yophawu lorhwebo ebhalisiweyo ye Sales Click, Inc., a Delaware iqumrhu abakwiindawo 917 S. Lusk Street, Suite 200, Boise Idaho, 83706, USA ne esetyenziswa yi imvume. indima ClickBank njengoko umthengisi aludibanisi endorsement, imvume okanye ngokutsha le mveliso okanye naliphi na ibango, ingxelo okanye uluvo esetyenziswa yokupasa le mveliso
I-website umxholo kunye nemveliso ziyathengiswa isekelwe phezu imbono yombhali kwaye inikwa kuphela i "njengoko kunjalo" kunye nezizathu "NJENGOKO EZIFUMANEKA". Kufuneka wenze uphando lwakho kwaye uqinisekise ulwazi kunye neminye imithombo xa sifuna ulwazi malunga nemiba yempilo kwaye usoloko ubuyekeze ulwazi ngononophelo kunye nomniki-nyango wakho owuqeqeshelweyo phambi kokuba usebenzise nayiphi na imithetho elandelwayo thaca kule website kunye / okanye imveliso wathengisa apha . Nam ClickBank okanye umbhali bazibandakanya ekunikezeleni ngeenkonzo okanye iingcebiso zobungcali yezonyango okanye efanayo ngale website okanye imveliso, yaye ingcaciso leyo inikiweyo ukuthatha indawo iingcebiso zobugqirha ezinikezelwa yi ugqirha okanye umboneleli yezempilo mvume. Kufuneka ukuba aqonde intengiso ClickBank ngayo le mveliso njengento endorsement yi ClickBank of the imibono apha, okanye nasiphi na isiqinisekiso okanye isiqinisekiso salo naluphi na qhinga, ingcebiso, unyango, inyathelo, okanye isicelo ngengcebiso ezenziwe ngumbhali le mveliso.